प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित सबै सांसदको पिसिआर परीक्षण, चार बजे संसद बस्द‍ै – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख २६ गते १४:१२
प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशन आजबाट सुरू हुँदैछ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबार दिउँसो ४ बजेबाट वर्षे अधिवेशन सुरू हुन लागेको हो।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार शुक्रबारका लागि सम्भावित आठ वटा कार्यसूची तोकिएको छ। बैठक सुरू हुनासाथ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने छन्।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र पारमाणविक विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको गौतले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नेछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
महासचिव गौतमका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश, २०७७’ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संक्रमण रोक्न व्यापक तयारी
संघीय संसदको बैठक आह्वान भएपछि सचिवालयले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। सभामुख सापकोटासहित सम्पूर्ण सांसदको पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षणपछि मात्रै संसद बैठकमा प्रवेश दिइने छ।
‘हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं, ’ संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरूले उपलब्ध गराएको सुझावका आधारमा कुनै कुरामा सम्झौता नगरी तयारी गरिएको छ।’
चिकित्सक र विज्ञको सुझावका आधारमा प्राथमिक तयारीदेखि पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षणसम्मको कार्य गरिएको धमलाले बताए।
बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि सबै सांसदले पिसिआर परीक्षण गरिसक्नुपर्ने छ। सचिवालयले पिसिआर टेस्ट नगरी बैठकमा प्रवेश नगर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छैन।
साथै, सबै सांसदलाई उक्त विषयमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिइएको छ। संसद सदस्यसँगै सम्बद्ध कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूको पिसिआर टेस्ट गरिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए।
‘रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै प्रवेश गर्न दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ, त्यसका अतिरिक्त सम्पूर्ण बैठक कक्ष, कार्यकक्ष, र पदाधिकारीका लबिहरूमा डिस्इन्फेक्टेड गरेर मात्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ धमलाले भने।
डिस्इन्फेक्टेड बनाएपछि चार घण्टासम्म सबै कक्षका ढोका बन्द गरिने छ। सेन्ट्रल एसीको साटो पङ्खा चलाइने छ। भित्र प्रवेश गर्नुअघि मास्क अनिवार्य गरिएको छ।
‘त्योभन्दा पहिले साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने र ठाउँ–ठाउँमा सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाइएको छ, सावधानी र सन्देशका सूचनाहरू बैठकका विभिन्न ठाउँमा राखेका छौं र दुरी कायम गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने।
बैठक कक्षमा एक मिटरको दूरी कायम गरिएको छ। एक जना सांसदले बोलिसकेपछि त्यही पोर्डिमयबाट बोल्नुपर्दा माइकसहित सबै ठाउँको सफाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने गेटहरू पनि अलग–अलग तोकिएको छ। ‘यी सहित सावधानीका सबै उपाय अपनाएका छौं,’ उनले भने। साथै, शौचालयलाई आधा–आधा घण्टामा सफाइ गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
बैठक कक्ष हेर्न पुगे प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित उच्च पदाधिकारी
संसद बैठक सुरू हुनुअघिको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद भवन पुगेका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसद बैठकको तयारीबारे स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
त्यसैगरी, सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले पनि संसद बैठक तयारीका सम्बन्धमा संसदमै पुगेर जानकारी लिएका छन्।
‘उहाँहरूले अनुगमनपछि छिटो समयमै गरिएको तयारीबाट आफूहरू खुसी भएको बताउनु भएको छ, फिडब्याक राम्रो छ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने।
संसद भवनमा विज्ञ चिकित्सकको टोली
संसद सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि चिकित्साक्षेत्रका अगुवा र विज्ञहरूलाई परिचालन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी उनको सचिवालयसँगको समन्वयमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक तयारी गरिएको छ।
संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार डा. अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञ चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएको छ।
‘चिकित्सकीय टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड हुनेगरी सुझाव दिनु भएको छ,’ धमलाले भने, ‘पिसिआर टेस्ट लगायतको काममा स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली आएर हेरिरहेको छ, र, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि आएर स्थलगत अध्ययन गरिरहनु भएको छ।’
संसदको स्वास्थ्य इकाइले सम्पूर्ण काममा उच्च सावधानीका साथ शुक्ष्म निगरानी गरी केही समस्या भए तत्कालै सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको धमलाले बताए।
सभामुखसहित सांसदहरूको पिसिआर परीक्षण
संसद सचिवालयका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्ममा २ सय ६८ जना सांसदले पिसिआर परीक्षण गराएका थिए। त्यसपछि काठमाडाैँमा उपलब्ध सबै सांसदले पिसिआर परीक्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा जम्मा ३ सय ३४ जना सांसद रहेका छन्। ५ जना सांसद छैनन्। ४ जना निलम्बित छन्। एक जना सदस्यको पुष्टि हुन बाँकी छ।
‘कतिपय सदस्यहरू राजधानी बाहिर हुनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने।
पिसिआर टेस्टका लागि बिहीबारै शीर्ष नेताहरू संसद भवन पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकाे पिसिआर परीक्षण बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै गरिएकाे छ।
सभामुख सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायतले पिसिआर परीक्षण गराएका छन्।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली लगायतले पनि पिसिआर परीक्षण गराएका छन्। साथै नेताहरू राजेन्द्र महतो, ओनसरी घर्ती, डा. डिला पन्त संग्रौला लगायतले पनि संसद भवन पुगेर पिसिआर परीक्षण गराएका छन्।